Like – 14K Share – 2059
2021-08-13 at 8:17 PM
PV TV သတင္းေျကညာသူအားလံုးကိုေလးစားလွ်က္ပါ
2021-08-13 at 8:33 PM
Google ရဲ္Myanmar ဝီကီပီးဒီးယား တွင် ပါေသာ အချ က် လက် ဟာ အင်တာနက် ဆုပ်ကိုင်ထား ခြင်း။။ ဆိုသည် မုာ သတင်း? ဂျင်းလား?
Zar Nay says:
2021-08-14 at 5:16 AM
သတင်းမှန်သိဖို့စီစစ်နည်း​တွေ​လေ့လာပါ ဂျင်းထည့်မခံရ​စေဖို့ တက်လာတဲ့သတင်းသည်ကျင့်ဝတ်သိက္ခါ​စောင့်ထိန်း​သောသတင်းဌာနမှသတင်းဟုတ်မဟုတ်အရင်ကြည့်ပါ ကျင့်ဝတ်သိက္ခါ​စောင့်ထိန်း​သောသတင်းဌာနများမှသ တင်းတက်လာခြင်းမရှိပါက fact check ကို google တွင်ရှာပြီးအတည် ပြုပါ မြန်မာသတင်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျင့်ဝတ်သိက္ခါ​စောင့်ထိန်း​သောသ တင်းဌာနများမှာ DVB,VOA,MIZZIMA, MRTV,MWD , BBC တို့ဖြစ်ပါသည်
2021-08-14 at 1:51 PM
Thanks PVTV.Always NLD.
2021-08-15 at 7:34 PM
Uklaw Uklaw says:
2021-08-15 at 7:43 PM
Moe Kaung Kim says:
Rain Moe says:
Ko Washington says:
2021-08-15 at 8:39 PM
မရှိရှိတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ တင်ဆက်သွားတဲ့ ဟားငါးကောင်
2021-08-15 at 8:43 PM
Ko Min Min says:
2021-08-15 at 8:52 PM
Lastking Koko says:
2021-08-16 at 12:14 AM
ဟုတ်တယ်ပြည်သူကို ဂျင်းတွေလိုက်ထည့်နေတာ သူတို့
ကသူတို့လုပ်တာဘဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူကိုမသိစေခြင်ရင် တစ်ခုခု ဂျင်းထည့်တော့တာ
ဘဲ ပြည်သူကရိုးနေပြီ မ အ
Daw Swe Swe Win says:
2021-08-16 at 3:07 AM
2021-08-16 at 8:47 AM
Daw Tin Soe says:
2021-08-16 at 9:06 AM
2021-08-16 at 10:30 AM
2021-08-16 at 12:16 PM
2021-08-16 at 5:48 PM
Christ Min says:
2021-08-16 at 8:41 PM
Yadanar Shwe Mi says:
2021-08-17 at 6:19 AM
ဈာန္ မင္း says:
2021-08-17 at 1:21 PM
သစ္စာဦး သစ္စာဦး says:
2021-08-19 at 6:22 AM
ပင်လယ်ပျော် ကိုကြီးသါ says:
2021-08-22 at 9:52 PM
2021-08-24 at 1:06 PM
မိဘ ကျေးဇူး says:
2021-08-27 at 9:14 AM
2021-08-28 at 4:45 PM
မွန္ လြန္းလို႔ ကို ေထာက္ခံတာပါ
Daw Kyi says:
2021-09-01 at 10:30 PM